कस्ता व्यक्तिलाई हुन्छ थाइराइड ? के छ उपचार विधि ?Main Samachar
६ बैशाख २०७८, सोमबार १६:४७ प्रकाशित
काठमाडौं । परिर्वतित जीवनशैलीका कारण पछिल्लो समय मानिसहरु कुनै न कुनै प्रकारको स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन्।
डायबिटिज, प्रेसर, कसैलाई मोटोपन, मधुमेह, इन्डोक्राइन डिसअर्डर जस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले गाँजिएका छन्। यस्ता समस्या देखिएका धेरै जसो व्यक्तिहरुमा थाइराइडको समस्या धेरै देखिने गरेको विज्ञहरुले बताएका छन्।
उनीहरुका अनुसार पछिल्लो समय थाइराइडको समस्या प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक हो। नेपालमा पनि उच्च संख्यामा थाइराइड पीडित रहेको चिकित्सकले बताउँदै आएका छन्।
थाइराइड शरीरको एक ग्रन्थी हो। हाम्रो शरीर लाखौँ कोष मिलेर बनेको हुन्छ। ती कोषको विकासमा थाइराइड हर्मन अत्यावश्यक हुन्छ। थाइराइड हर्मोनबिना बाँच्न नै असम्भव हुन्छ।
शरीरका कोष तथा तन्तुलाई विकास गर्न र परिपक्व बनाउन थाइराइड मानव शरीरमा हने गर्छ। जसले गर्दा थाइराइड हुनुलाई कुनै समस्या रुपमा लिइदैन। तर, थाइराइडमा आउने उतारचढावका कारण भने समस्या हुन सक्छ।
शरीरमा आवश्यकभन्दा बढी थाइराइड हर्मोन बढी (हाइपर), कम (हाइपो) हुनु वा थाइराइड हर्मोनको असामान्य रुपमा उत्पादन हुनुलाई समस्याको रुपमा लिइन्छ। मानिसका लागि अत्यावश्यक थाइराइड हर्मोनको उत्पादन थाइराइड ग्रन्थीले नै गर्छ। थाइराइड ग्रन्थी घाँटीको बीच भागमा हुन्छ।
जब थाइराइड हर्मोन उत्पादनमा गड्बढी देखिन थाल्छ। त्यपछि भने समस्या देखिन थाल्छ। शरीरमा धेरै मात्रामा थाइराइड हर्मोन हुने अवस्थालाई ‘हाइपरथाइरोइडिजम्’ भनिन्छ। त्यस्तै, कम मात्रामा हर्मोन उत्पादन हुनु ‘हाइपोथाइरोइडिजम्’ हो।
थाइराइडलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को ग्रन्थी टाउकोमा हुन्छ। जसलाई ‘पिट्युटरी’ भनिन्छ। पिट्युटरीको नियन्त्रणमा रहेर थाइराइडले हर्मोन उत्पादन गर्छ।
पिट्युटरीबाट आउने ‘थाइराइड स्टिमिलेटिङ हर्मोन’ (टिएसएच) का कारण थाइराइड ग्रन्थीले ‘टि–थ्री’ र ‘टि–फोर’ नामक हर्मोन उत्पादन गर्छ।
शरीरलाई आवश्यक परेमा ‘टिएसएच’का साथै ‘टि–थ्री’ र ‘टि–फोर’ बढी मात्रामा उत्पादन हुन्छ। शरीरलाई आवश्यक नपरेमा थाइराइड ग्रन्थीले पिट्युटरीमा ‘नेगेटिभ फिडब्याक’ पठाएर टिएसएच कम उत्पादन गर्ने गराउँछ।
जसअनुसार पिट्युटरीले ‘टिएसएच’ कम उत्पादन गर्छ र त्यसकै कारण थाइराइड ग्रन्थीले पनि ‘टि–थ्री’ र ‘टि–फोर’ कम उत्पादन गर्छ।
समस्या कसलाई धेरै?
थाइराइडको समस्या जुनसुकै उमेरमा पनि हुन सक्छ। तर यो समस्या पुरुषको तुलनामा महिलामा धेरै हुन्छ। पुरुषको तुलनामा महिलालाई ‘हाइपरथाइरोडिथजम्’ वा ‘हाइपोथाइरोडिजम्’ हुने सम्भावना १० गुणा बढी हुन्छ। महिलासँगै बालबालिकामा पनि यो समस्या देखिन्छ।
यसमा यदि गर्भवतीमा यो समस्या देखिएको छ भने भने हर्मोनलाई तत्काल सच्याउनु जरुरी हुन्छ। गर्भावस्थामा थाइराइडको समस्या भए गर्भमा रहेको बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। थाइराइड समस्याले गर्भावस्था र सुत्केरी भएपछि पनि बच्चाको जीवनमा असर गर्छ।
गर्भावस्था भनेको विशेष अवस्था हो। बच्चाको मस्तिष्कको विकास गर्भमा रहेको पहिलो तीन महिनामा बढी हुन्छ। त्यतिबेला जति आमाले पौष्टिक आहार पाउँछन्, त्यति नै बच्चा फूर्तिलो र तेजिलो हुन्छ।
थाइराइड समस्यामा हर्मोनलाई सन्तुलनमा ल्याएर उपचार गर्न सकिन्छ। ‘हाइपरथाइराइडिजम्’ले अन्य स्वास्थ्य समस्यालाई बढाउन सक्छ। जसकारण उपचारमा समस्या आउन सक्छ।
थाइराइड हुँदा कस्ता लक्षण देखिन्छन्?
– खाने खाना र खानाको प्रकार एकै भएमा एक्कासी शरीरको तौल बढ्ने
– मुटु धेरै धड्किने, एक मिनेटमा एक सयभन्दा धेरै पटक धड्किने, असामान्य मुटुको धड्कन
– आत्तालिने, तनाव लिने, झर्किने
– हात र औँलामा समय समयमा कम्पन हुने
– महिनावारी समयमा परिवर्तन
– तातो कुराप्रति बढी संवेदनशील
– थकित हुने र मांशपेशी कमजोर हुने
– निदाउन गाह्रो हुने
– छाला पातलिने
– थाइराइड ग्रन्थी सुनिने
थाइराइड समस्या देखिने बित्तिकै तुरुन्त विशेषज्ञ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार लामो समयसम्म उपचार तथा नियमित रुपमा रक्त परीक्षण गर्नुपर्छ।
यो समस्याबाट बच्नका लागि समय–समयमा थाइराइड हार्मोनको रक्तपरीक्षण गर्ने रोग भएमा समयमै उपचार गर्नु पर्दछ।
त्यसबाहेक आयोडिनयुक्त नुन तथा खाना खाने, अनावश्यक रुपमा एक्सरे, सीटीस्क्यान आदि पटक–पटक नगर्ने, तनाव, चिन्ता र हतासलाई न्यूनीकरण गर्ने, धेरै चिया, कफी तथा चुरोटको सेवन गर्नु हुँदैन। स्वस्थ र सक्रिय जीवनशैली अवलम्बन गर्नु पर्छ।
त्यसबाहेक रेडियोएक्टिभ, आयोडिन तथा एन्टी थाइराइड औषधि र शल्यक्रिया (हाइपरथाइराइडिजम्का लागि) र थाइराइड हार्मोन चक्की (हाइपोथाइराइडिजम्का लागि)लगायतका विभिन्न रासायनिक हर्मोनहरुको प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गरिदै आएको छ।